COI-Météo France-AFD: hampivory ho fiatrehana ny andro ratsy | NewsMada
COI-Météo France-AFD: hampivory ho fiatrehana ny andro ratsy
Nanapa-kevitra ny COI (Commission de l’océan Indien) miaraka amin’ny Météo France hampiantso fivoriana manokana ho an’ny Nosy rehetra manodidina, ho fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Manohana izany ny AFD (Agence française de développement) miainga avy amin’ilay fandaharanasany Adapt’Action, andiany faha-7. Voakasika amin’izany fandaharanasa izany ka hampivoriana, ny 17 hatramin’ny 21 septambra ho avy izao, i Madagasikara sy ireo Nosy rehetra manodidina (i Comores, i Seychelles, i La Réunion, i Maurice), miaraka amin’i Tanzania, i Mozambika sy i Afrika Atsimo.
Tanjona amin’ny fihaonana ny fifehezan’ireo firenen-drehetra ireo sy hahafantatra bebe kokoa momba ny toetr’andro ho avy aty amin’ny faritra atsimo andrefan’ny ranomasimbe Indianina. Fantarina manokana ny vanim-potoana fihavian’ny rivodoza, ny fahavaratra, ny hafanana.
17,2 miliara dolara ny fahavoazana miantraika any amin’ny fambolena sy ny toekarena ankapobeny, nanomboka ny taona 1980. Mbola betsaka ny tsy tafarina hatramin’izao eto Madagasikara noho ny fandalovan’ny rivodoza mateti-pihavy. Koa laharam-pahamehana faritan’ny COI ny fiaraha-miasa ho fisorohana ny vokatry ny andro ratsy, hisian’ny fampandrosoana maharitra. Mandritra io fivoriana io, hifanakalozana traikefa aty amin’ny faritra ho fiatrehana ny andro ratsy.